अष्ट्रेलिया विशेषः केही बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू र तिनका जवाफ
म छिट्टै नै पीआर अप्लाई गर्दैछु । के मेरी श्रीमतीले पनि आइएल्ट्स दिनुपर्छ ? अथवा आइएल्ट्सको विकल्पमा अरू के गर्न सकिन्छ ?
तपाईंसँगै पीआरको लागि आवेदन दिने हो भने तपाईंकी श्रीमतीको कम्तीमा पनि काम चलाउ (ागलअतष्यलब)िस्तरको अंग्रेजी हुनुपर्दछ । यसको निम्ति निम्नमध्ये कुनै एक प्रमाण पेश गर्न सकिन्छः
१. आइएल्ट्समा औसतमा साढे चार वा त्योभन्दा बढी ल्याएको प्रमाण (यसको विकल्पमा पीटीई वा त्यस्तै अन्य परीक्षा पनि दिन सकिन्छ)
२. एडल्ट माइग्रेन्ट इङ्लिश प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने संस्थाबाट काम चलाउ स्तरको अंग्रेजी छ भन्ने सिफारिस,
३. अस्ट्रेलिया वा विदेशी शैक्षिक संस्थामा कम्तीमा दुई वर्षसम्म अंग्रेजी माध्यममा ट्रेड, डिप्लोमा वा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेको प्रमाण,
४. अस्ट्रेलियामा डिप्लोमा वा त्योभन्दा माथिल्लो तहमा अंग्रेजी माध्यममा कम्तीमा एक वर्ष पढेको प्रमाण
माथिका मध्ये कुनै पनि प्रमाण दिन सकिएन भने पनि तपाईंकी श्रीमतीले पीआर नपाउने भन्ने हुँदैन् । तर, त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले सरकारलाई पैसा तिर्नुपर्छ । अहिले तोकिएको दर अनुसार तपाईंले ४,८८५ डलर बुझाउनु पर्दछ ।
म रिजनल स्पोन्सरसीपको लागि योग्य छु । मैले अहिले ४८९ भिसा लिएँ र केही महिना भित्रमा मेरो आइएल्ट्समा ७ आयो भने मैले तुरुन्तै पीआर हाल्न मिल्छ कि दुई वर्ष नै कुर्नुपर्दछ ?
तपाईं ४८९ भिसामा हुँदाहुँदैं सिधै पीआरको लागि पनि प्वाइन्ट पुग्यो भने तपाईंले पीआरको लागि आवेदन दिन मिल्छ । दुई वर्ष कुर्न पर्दैन ।
म सिड्नी आएको ९ वर्ष भयो । म सुरुबाट अहिलेसम्म नै स्टुडेन्ट भिसामा छु । मेरो छोरो आठ वर्षको भयो र ऊ यहीँ जन्मेको हो । ऊ जन्मेदेखि यहाँ हामीसँगै छ र अहिले तीन कक्षामा पढ्छ । दश वर्षसम्म लगातार अस्ट्रेलिया बसेको विदेशीले स्वतः पीआर पाउँछन रे भन्ने सुनेको छु । के यो साँचो हो ?
दश वर्षसम्म अस्ट्रेलिया बस्दैमा स्वतः पीआर पाइने भन्ने नियम छैन् । तर, तपाईंको छोराले भने दश वर्ष पुगेपछि यहाँको नागरिकता पाउने स्थिति देखिन्छ ।
दुई हप्तामा चालीस घण्टा काम गर्न पाउने भन्ने नियमको बारेमा अलिकति प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
विद्यार्थी भिसामा शर्तहरू ८१०४ वा ८१०५ लगाइएको हुन्छ । पीएचडी वा रिसर्चमा मास्टर्स गरिरहेका बाहेक अन्य विद्यार्थीले पढाइ चलिरहेको समयमा दुई हप्तामा ४० घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने नियम छ । दुई हप्ताको चालीस घण्टा हिसाब गर्दा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने धेरै विद्यार्थी र रोजगारदाताहरू अन्योलमा परेको पाइएको छ । तलको यो उदाहरणबाट यस व्यवस्थालाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छः
हरि ब्याचलर्स अफ अकाउन्टिङका विद्यार्थी हुन् । अहिले उनको पढाइ चलिरहेको छ । उनी एउटा सुपर मार्केटमा काम गर्छन् । गएको चार हप्तामा उनले गरेको कामको विवरण निम्नअनुसार छः
हप्ता १ः १० घण्टा
हप्ता २ः ३० घण्टा
हप्ता ३ः १५ घण्टा
हप्ता ४ः २५ घण्टा
सर्सर्ती हेर्दा हरिले पहिलो दुई हप्तामा ४० घण्टा र अन्तिम दुई हप्तामा पनि ४० घण्टा नै काम गरेकोले भिसाो शर्तभित्र रहेरै काम गरेको देखिन्छ । तर, त्यसो होइन । पहिलो दुई हप्ता र अन्तिम दुई हप्तामा उनले गरेको काम नियम संगत नै छ । तर, यदि दोस्रो र तेस्रो हप्तामा काम गरेको घण्टा जोड्यौँ भने उनले ती दुई हप्तामा ४५ घण्टा काम गरेको भेटिन्छ । यहाँ उनले भिसाको शर्त उल्लंघन गरेका छन् ।
विद्यार्थी डिपेन्डेन्ट् भिसामा भएकाहरूको हकमा पनि यही नियम लागु हुन्छ । उनीहरूको हकमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मास्टर्स वा त्योभन्दा माथिका विद्यार्थीका डिपेन्डेन्ट्ले जतिसुकै घण्टासम्म पनि काम गर्न पाउँछन् । त्योभन्दा तल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका डिपेन्डेन्ट्ले भने कुनै पनि हालतमा (विद्यार्थीको पढाइ नचलेको समयमा समेत) दुई हप्ताको चालीस घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाइँदैंन् ।